चैत १० गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द, लामो दूरी भनेको कति ? - Himali Patrika
चैत १० गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द, लामो दूरी भनेको कति ?
हिमाली पत्रिका ९ चैत्र २०७६, 7:06 am
काठमाण्डाै – सरकारले सोमबारदेखि लामो दुरीका सार्वजनिक गाडी चलाउन रोक लगाएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक अरु ठाउँमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गाडी चलाउन नपाइने सरकारले जनाएको छ ।
लामोदुरी भनेको कति ?